सासू-ससुरासित कसरी राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने? | परिवारका लागि
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उर्दू एफिक एस्टोनियन कन्नडा किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुभेल वारे-वारे शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
सासू-ससुरासित कसरी राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने?
हामी गाह्रो परिस्थितिको सामना गर्दै थियौं। मेरी पत्नीले हाम्रो अवस्थाबारे आफ्नो बुबाआमालाई बताइन्‌। त्यसपछि तिनको बुबाले मलाई सल्लाह दिन फोन गर्नुभयो। यो कुरा मलाई पटक्कै मन परेन।”—जित *
“मेरी सासू प्रायः यसो भन्ने गर्नुहुन्छ: ‘छोराको मलाई धेरै याद आउँछ।’ उहाँहरू निकै घनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई सुनाउनुहुन्छ। उहाँको छोरासित विवाह गरेर उहाँलाई चोट पुग्नुमा मेरै गल्ती छ जस्तो लाग्छ।”—निशा
सासू-ससुरासितको समस्यालाई वैवाहिक जीवनको समस्या नबनाउन के गर्न सकिन्छ?
विवाहले नयाँ परिवारको सुरुवात गर्छ। बाइबलमा यसो लेखिएको छ: जब कुनै पुरुषले विवाह गर्छ उसले “आफ्ना बुबा र आमालाई छोड्नेछ अनि आफ्नी पत्नीसित बस्नेछ।” पत्नीको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। बाइबलमा यस्तो बताइएको छ: जब तिनले विवाह गर्छिन्‌ तिनीहरू दुवै “एउटै शरीर” हुन्छन्‌। हो, तिनीहरू दुवै मिलेर एउटा नयाँ परिवारको सुरुवात हुन्छ।—मत्ती १९:५.
बुबाआमाभन्दा वैवाहिक जीवन महत्त्वपूर्ण छ। विवाहसम्बन्धी सल्लाहकार जोन एम. गटमेन यसो भन्छन्‌: “वैवाहिक सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जोडीले जस्तोसुकै निर्णय गरे तापनि तिनीहरूले एकअर्काको विचार बुझ्नुपर्छ। आफ्नो जोडीसितको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने हो भने तपाईंको पहिलेको परिवारसित अर्थात्‌ बुबाआमा वा दाजुभाइ दिदीबहिनीसितको सम्बन्धमा केही छाँटकाँट गर्नु समावेश छ।” *
नयाँ परिस्थिति स्वीकार्न केही बुबाआमालाई गाह्रो लाग्न सक्छ। एक जना जवान पति यसरी बताउँछन्‌: “विवाह हुनुअघि मेरी पत्नीले सधैं आफ्नो बुबाआमाको इच्छालाई प्राथमिकता दिन्थिन्‌। तर विवाहपछि छोरीले अरूलाई नै प्राथमिकता दिएको देख्दा तिनकी आमालाई यो कुरा स्वीकार्न निकै गाह्रो भयो।”
नवविवाहित जोडीलाई पनि गाह्रो हुन सक्छ। सुरुमा उल्लेख गरिएको जित अझै यसो भन्छन्‌: “सासू-ससुरा भनेको साथी छान्नु जस्तो होइन। यो त कसैले तपाईंलाई यसो भनेको जस्तै हो, ‘तिमीले चाहे पनि या नचाहे पनि अब तिम्रो दुई जना नयाँ साथी छन्‌।’ उहाँहरूदेखि दिक्क लागे तापनि आखिर उहाँहरू तपाईंकै परिवार हुनुहुन्छ।”
सासू-ससुराको विषयलाई लिएर तपाईं र तपाईंको जोडीबीच ठाकठुक पर्छ भने मेलमिलापको भावसहित यस विषयलाई सुल्झाउने कोसिस गर्नुहोस्। बाइबलको यो सल्लाह पालन गर्नुहोस्: “शान्ति खोज र त्यसकै पछि लाग।”—भजन ३४:१४, NRV.
शान्ति कायम गर्न निम्न अवस्था विचार गर्नुहोस्। प्रत्येक अवस्था पति वा पत्नीको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरिएको भए तापनि यी अवस्था दुवैलाई लागू हुन्छ। अनि यहाँ छलफल गरिने सिद्धान्तले सासू-ससुरासित सम्बन्धित थुप्रै समस्यालाई सुल्झाउन मदत गर्नेछ।
आमासित तपाईंको अझ राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने तपाईंकी पत्नी चाहन्छिन्‌। तर तपाईंलाई भने सासूसित राम्रो व्यवहार गर्न साह्रै गाह्रो लाग्छ।
यसो गरे कसो होला? यो कुरा आफ्नी पत्नीसित छलफल गर्नुहोस् र सम्झौता गर्न इच्छुक हुनुहोस्। तपाईंले आफ्नी पत्नीलाई सधैंभरि प्रेम गर्छु भनेर वाचा बाँध्नुभएको छ। त्यसैले “मलाई मेरो सासु यस्तो लाग्छ या उस्तो लाग्छ” भन्ने कुरा तपाईंको मुख्य चिन्ताको विषय नभई पत्नीसितको सम्बन्ध हो। छलफलको दौडान सासूसितको सम्बन्ध सुधार्न के गर्न सकिन्छ, एक दुईवटा उपाय निकाल्नुहोस् र त्यसैअनुसार गर्नुहोस्। तपाईंले गर्नुभएको कोसिस देख्दा तपाईंप्रति पत्नीको आदर पक्कै बढ्नेछ।—बाइबल सिद्धान्त: १ कोरिन्थी १०:२४.
पतिलाई भन्दा बुबाआमालाई खुसी पार्न चाहनुहुन्छ भनेर तपाईंको पति गुनासो गर्छन्‌।
यसो गरे कसो होला? आफ्नो पतिसित यस समस्याबारे छलफल गर्नुहोस्। समस्यालाई पतिको नजरबाट हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो बुबाआमालाई दिनुपर्ने आदर मात्र दिइरहनु भएको हो भने तपाईंको पति आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन। (हितोपदेश २३:२२) तैपनि बुबाआमाले नभई पतिले नै तपाईंको जीवनमा प्रथम स्थान पाएको छ भनेर तपाईंको बोली र व्यवहारद्वारा पतिलाई ढुक्क बनाउनुपर्ने हुन सक्छ। तपाईंले पतिलाई यस कुरामा विश्वस्त बनाउनुभयो भने तपाईंको ध्यान पाउन सासू-ससुरासित प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जस्तो तिनले महसुस गर्ने छैनन्‌।—बाइबल सिद्धान्त: एफिसी ५:३३.
तपाईंकी पत्नी सल्लाह माग्न तपाईंकहाँ नभई आफ्नो बुबाआमाकहाँ जान्छिन्‌।
यसो गरे कसो होला? यसबारे पत्नीसित कुरा गर्नुहोस् र बुबाआमासित कुन-कुन विषयमा सल्लाह माग्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे छलफल गर्नुहोस् र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहोस्। व्यावहारिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो चिन्ताबारे बुबाआमासँग कुरा गर्नु के सधैं गलत हो? कहिले उपयुक्त हुन सक्छ? तपाईंहरू दुवै जना सहमत हुनुहुन्छ भने बुबाआमासित सल्लाह माग्दा समस्या हुँदैन।—बाइबल सिद्धान्त: फिलिप्पी ४:५.(g15-E 03)
^ अनु.4यस लेखमा नामहरू परिवर्तन गरिएका छन्‌।
^ अनु.9द सेभेन प्रिन्सिपल्स फोर मेकिङ् म्यारिज वर्क भन्ने किताबबाट लिइएको हो।
“हरेकले आफ्नो होइन तर अर्को मानिसको फाइदा खोज्ने गरोस्।” —१ कोरिन्थी १०:२४.
“पत्नीले पनि आफ्नो पतिको गहिरो आदर गरोस्।”—एफिसी ५:३३.
सकारात्मक पक्षमा ध्यान दिनुहोस्
“तपाईंले सासू-ससुरासित राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरूले नै तपाईंको जोडीलाई पालनपोषण गर्नुभयो। त्यसैले उहाँहरूमा जस्तोसुकै त्रुटि भए तापनि उहाँहरूप्रति आभारी हुनुपर्छ। तिनीहरूको अनुभवबाट पनि तपाईंले थुप्रै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्ना सासू-ससुराका राम्रा गुणहरूमा ध्यान दिनुभयो र त्यसलाई अनुकरण गर्नुभयो भने तपाईं अझै परिपक्व व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ।”—ज्योति
सासू-ससुरासितको सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाइराख्ने?
आफ्नो श्रीमान्‌/श्रीमतीसितको सम्बन्धमा कुनै असर नपर्नेगरि तपाईं आमाबुबाको आदर गर्न सक्नुहुन्छ।
दम्पती र आमाबुबाका लागि मदत